Sharcigu waligiis wuu ku soo jiitay. Tani waa jidka aad rabto inaad doorato.
Laakiin ma hubtaa inaad saxan tahay? Sidee ku ogaan kartaa in daraasaadka riyooyinkaagu ay isu beddelayaan riyo xun? Isla markiiba naftada geli wadnaha caalamkan soo jiidashada leh ee qaar ka mid ah, kuwa kale hermetic.
Kaalay oo hel sirta koorsooyinka, nolosha ardayda iyo xirfadaha sharciga ee Jaamacadda Panthéon-Assas. Hana ka jawaabin su'aashan muhiimka ah: "Runtii sharcigu aniga ma aniga?" "
MOOC-kan waxa lagugu soo bandhigay xoriyada abaabulka oo dhamaystiran. Waxa ku jira waxa loo qaybiyaa 5 qaybood. Waxaad u raaci kartaa hab kasta iyo waqti kasta oo adiga kugu habboon siddeed bilood!
Sax, ma aniga? Diisambar 18, 2021Tranquillus
READ Falanqaynta Xogta Excel: ku taxliil xogta 'Excel'
horeKu dhiiran inaad ka shaqeyso warshadaha mustaqbalka
socdaXirfadaha hidaha dhaqanka